अचम्म ! यो परिवार नौ वर्षदेखि भूमिगत | Samabesi Khabar
अचम्म ! यो परिवार नौ वर्षदेखि भूमिगत
एजेन्सी,५ फागुन ।
सन् २०१२ मा विश्व ध्वस्त हुने भविष्यवाणी एकदमै प्रचलित रह्यो । कैयौं मानिसहरु विश्वको अन्त्यको कुरालाई साँचो पनि माने र बाँच्नका लागि अनेकौं उपायहरु पनि अपनाउन थाले । तर अन्तमा विश्व ध्वस्त भएन र सबैलाई थाहा भयो उक्त भविष्यवाणी झुटो रह्यो । बाँच्नका लागि कैयौं मानिसहरु अनेकौं उपायहरु अपनाय ।
जसमा एक परिवारले यस्तो उपाय अपनाए जुन सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । उक्त परिवारले विश्व ध्वस्त हुने समयको प्रतिक्षा गर्दै ९ वर्षसम्म जमीन भित्रको कोठामा भूमिगत रहे । घटना नेदरल्यान्डको राजधानी एम्सटर्डम बाट करीब १४० किलोमिटर उत्तर–पूर्व को ओर ड्रेन्थ प्रान्तको रुइनरवल्र्ड गाउँस्थित फर्महाउसको हो । उक्त फर्महाउसको अन्डरग्राउन्ड कोठामा एक डच परिवार नौ वर्षदेखि विश्व ध्वस्त हुने प्रतिक्षा गर्दै बसे । यस परिवारमा ५८ वर्षका एक वृद्ध सँगै १६ देखि २५ वर्षका बीचका ६ जना साथमा थिए ।
तीनैमध्ये २५ वर्षीय युवा फर्महाउसबाट भाग्न सफल रहे र नजिकैको एक बियर बारमा पुगे र उक्त बारका मालिक क्रिस वेस्टबीकसँग सहयोग मागे, जसपछि उक्त घटना बाहिर आयो र प्रहरीकोमा सूचना पुग्यो । बियर बारका कालिक क्रिसका अनुसार २५ वर्षका ती युवा उनको बार आए र ५ बियर पिए । त्यसपछि ती युवकले बताए की उ घरबाट भागेर आएको छ र उसलाई मद्दतको आवश्यकता रहेको छ । त्यसपछि क्रिसले प्रहरीलाई खबर गरेका हुन् । जानकारी प्राप्त भएपछि प्रहरी फर्महाउस पुगे र भूमिगत कोठामा ५८ वर्षीय जेन जोन वेन डोर्सटन नामका वृद्ध खाटमा सुतिरहेका थिए । साथसाथै त्यहाँ १६ र २५ वर्षको बीचका उमेर रहेका अन्य बच्चा तथा किशोर पनि रहेका थिए ।
प्रहरीले डोर्सटनलाई छानवीनमा सहयोगका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । जाँचमा पत्ता लागेअनुसार उक्त परिवार फर्महाउसमा सागसब्जी लगाउने र पशुपालन गर्दै आफ्नो गुजारा गर्थे । ती किशोर–किशोरीहरुको र डोर्सटनको सम्बन्ध भने खुलाइएको छैन । उनीहरुले डोर्सटनलाई आफ्नो बुबा भनेका छैनन् । बारका मालिक वेस्टबीकका अनुसार २५ वर्षीय ती युवक जो उनी भएको ठाउँमा आएका थिए उसको दाह्री–जुँगा बढेर ठूलो भएको थियो । उनले धेरै समयदेखि कपाल पनि काटेका थिएनन् ।
ती युवक ९ वर्षदेखि भूमिगट कोठामा रहेका थिए र फर्महाउसबाट बाहिर निस्कन सक्दैनथे । उसका भाइ–बहिनीको अवस्था ती युवकको जस्तै रहेको थियो । यसका साथै ती युवक भूमिगत कोठामा बस्न चाहँदैनथे । युवकले संवादको क्रममा बताए की, उनी रातमा भागेका थिए, किनभने अन्य समयमा त्यहाँबाट भाग्न असम्भव नै रहेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार छानवीन प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । जसकारण यो भन्दा बढी जानकारी बाहिर ल्याउन नमिल्ने पनि प्रहरी बताउँछ । ती युवा, बालबालिकाको आमाको बारेमा भने कुनैपनि जानकारी प्राप्त भएको छैन । एक स्थानीयका अनुसार बच्चाहरुको आमाको बारेमा कसैलाई थाहा छैन । ती स्थानीयको अनुमान छ, शायद आमा लाई फर्महाउसमा नै गाडिएको थियो ।
क्षेत्रमा मेयर रोजर डि ग्रुटले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने की उनले अहिलेसम्म आफ्नो जीवनमा यस्तो अप्रिय घटना देखेका थिएनन् । मानिसहरुले घटनाको उजुरी दिएसँगै प्रहरी छानवीनमा जुटिरहेको छ र छिट्टै सबै सत्य–तथ्य पत्ता लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
श्रीमानको मृत्यु पछि घाटबाट नै सिंन्दुर पोते लगाएर घर फर्किन् रेनुका